सन्तान नभएकै कारण यी महिलालाइ श्रीमानले गर्न लगाए यस्तो, ससुरा र देवरसँग! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > सन्तान नभएकै कारण यी महिलालाइ श्रीमानले गर्न लगाए यस्तो, ससुरा र देवरसँग!
admin October 18, 2020 जीवनशैली, समाज	0
एजेन्सी । सन्तान नहुनु महिलाको मात्र कमजोरी होइन । वास्तावमा बच्चा जन्मने र नजन्मने पुरुषमा पनि भर पर्छ । तर समाजमा सन्तान नहुनुको जिम्मेवार महिलालाई मात्र बनाउने गरिएको छ । सन्तान नहुँदाको पि’डा एउटी महिलाले कति सम्म भोग्नु पर्छ भन्ने उदाहरण एक महिलाले भोगेले भोगेकी छन् । आफुसंगको सम्बन्धमा सन्तान नजन्मिएपछि श्रीमानले नै श्रीमतीलाई ससुरा संग पठाइदिएका छन् । अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
साढे २२ किलो अवैध सुनकाण्डमा किन कोहि समातिएनन्?